umatshini wokusika udizili isando isando somshini wokusika umshini wemishini umshini wentengo
Umsiki wamakhoba wezolimo kanye nesando ngesando kusetshenziselwa ukusika utshani / isageage nokugaya okusanhlamvu,okuyi-mehendi yokusika utshani bommbila obuluhlaza noma obomile,utshani bekotini, indebe yesoya,utshani kanye ne-hay njll kube yizicucwana ngaphambi kokuba kuxutshaniswe nenye imfoloko bese kunikwa izilwane. umsiki wamakhoba nomshini we-grinder usiza ukugaya kwesilwane futhi kuvimbela izilwane ukwenqaba noma iyiphi ingxenye yokudla kwazo.
Ukusetshenziswa kweshizi yokusika isando ngesigayo
Lokhu amakhoba umsiki isando isigayo kuhlangene ezimbili functions.chaff umsiki kungenziwa asebenza ukusika zonke izinhlobo zezilimo ezimanzi futhi omile, Isiqu sommbila ,utshani belayisi, utshani bukakolweni ,isiqu sikabhontshisi, utshani obuluhlaza ,isiqu sobusela njll ,ngamandla amakhulu. umshini wokusika umququ ongasetshenziselwa ummbila,ukolweni,ukugaya ummbila njll., umshini wokusika udizili we-diesel chise imishini efanelekile yezolimo yezinkomo,ipulazi,umlimi owondla inkomo, ihhashi, imvu, inyamazane, irabha njll.
Ukuzuzwa komshini we-chris cutter grinder
1.Ubude bokusika utshani bungashintshwa,ubude bukhona 9 mm,12mm,18 mm,30 mm
2.Umshini wokugaya umgexo wesando somshini ungashayelwa imoto kagesi,injini yedizili nenjini yegesi. Singakwazi Macthed amandla nesondo ngokusho amaklayenti’ funa ,noma ungathenga imoto noma injini emakethe yakho yasekhaya singakulungiselela isisekelo sezimoto noma senjini.
3.Isikhundla esiphakeme sedatha lokuphakela,uhla olude lokukhutshwa kwamakhoba,umthamo ophakeme we-corn silage making.chaff cutter grinder mill usayizi omncane,isakhiwo sensimbi exubile, isisindo esilula esisebenza ngokuqinile.
4.I-blade ye-christ cutter grinder mill yenziwa ngensimbi ephezulu, elihlanjululwa ngenqubo ekhethekile futhi eline-super wear-resisting.Hight bollts asetshenziselwa ukuphepha nokwethenjwa.
5.Igobolondo lomshini wokugaya udizili isando somshini wokugaya ushuthelwe ngensimbi eshisayo yensimbi ngokuqhubekayo, kwakheka konke ukubumba, muhle futhi unesandla esivulekile, futhi ihlala isikhathi eside.
6.umshini we-chris cutter grinder unesakhiwo sohlaka lwensimbi, ivolumu encane, isisindo esikhanyayo, elula ukuhambisa.Safe futhi ithembekile ngokwakhiwa kwedivayisi ephephile, Ukuqeda ukuhlafuna ingozi yommese.
7.umsiki wamakhoba nomshini we-grinder unentengo ephansi yokuthengiswa kepha ikhwalithi enhle kakhulu futhi ethembekile ngemuva kokuthengiswa kwensiza fektri .
Amapharamitha wezobuchwepheshe womshini we-chris cutter grinder
Utshani obomile 500 ~ 600
Utshani obomile 800 ~ 1000
Utshani obomile 1000 ~ 1200
Utshani obunamanzi 1500 ~ 2000